Lesona iray amin'ny fanasan-damba - Church of God Switzerland of the World
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2018-01 > Lesona avy amin'ny fanasan-damba
Ny fanasana fitafiana dia iray amin'ireo zavatra fantatrao tokony hataonao raha tsy mahazo olon-kafa hanao izany ho anao ianao! Ny akanjo dia tsy maintsy mamolavola - loko mainty misaraka amin'ny fotsy sy ny maivana. Ny singa sasany amin'ny fitafiana dia tokony hosasana amin'ny fandaharana malefaka sy ny mpanadio manokana. Azo atao ny mianatra an'io fomba sarotra io satria ny zavatra niainako tany amin'ny oniversite. Napetrako tao anaty milina fanasan-damba vaovao ny akanjo mavokely mena maloto ary miloko mavo ny zava-drehetra. Rehefa afaka izany, fantatry ny rehetra ny zava-mitranga raha adinonao ity ary apetraho ao anaty kitay ilay izy.
Miambina ny lambanay izahay. Fa adinontsika indraindray fa tokony hifampidinika amin'ny fomba mitovy ny olona. Tsy dia manana olana be loatra isika amin'ny resaka mazava be, toy ny aretina, ny kilemaina na ny fotoan-tsarotra. Saingy tsy afaka mijery ny mpiara-belona amintsika isika ary mamantatra ny atao sy ny fomba fiheviny. Mety hitarika korontana izany.
Mora ny mijery olona iray ary manao fitsarana. Ny tantaran'i Samoela, izay noheverina nanosotra mpanjaka tsy ho zanak'i Jese maro, dia mahazatra. Iza no mety nieritreritra fa Andriamanitra dia nanadino an'i Davida ho mpanjaka vaovao? Na i Samoela aza dia tsy maintsy nianatra izao lesona izao: "Fa hoy ny Tompo tamin'i Samoela:" Aza talanjona amin'ny maha-izy azy sady tsara tarehy. Tsy izy no ilay voafidy. Samihafa ny fitsarako olona noho ny olona. Ny olona mahita izay manitikitika ny maso; fa mijery ao am-po aho » (1 Sam 16,7 Vaovao Mahafaly Vaovao).
Tokony hitandrina isika fa tsy handray fanapahan-kevitra momba ny olona izay vao nihaona amintsika. Na ireo olona tsy fantatra hatrizay aza ireny. Tsy azontsika atao ny mamantatra hoe inona no zavatra niainan'ireto olona ireto sy ny fomba niantraikan'izy ireo sy namolavola azy ireo.
Ao amin'ny Kolosiana 3,12: 14 Ampahatsiahivina antsika ny fomba tokony hifampitondrantsika: «Ry rahalahy sy rahavavy, voafidin'Andriamanitra ianareo, olon'ny olony masina, tian'Andriamanitra. Izany no antony itorianao ankehitriny amin'ny fangoraham-po lalina, amin'ny fahatsoram-po amin'ny fahamaotinana, ny fahamaotinana, ny fandinihana ary ny faharetana. Mahaiza mifandefitra sy mifamela heloka, raha misy zavatra manala ny iray. Tahaka ny namelan'ny Tompo ny helokareo dia samy tokony hifamela heloka ianareo. Fa ambonin'izany rehetra izany, mitafy ny fitiavana; io no fatorana mampiray anao amin'ny firaisana tanteraka ».
Ao amin'ny Efesiana 4,31-32 Vakiantsika (NGÜ): «Ny lolom-po, ny hatezerana, ny hatezerana, ny fihorakorahana feno hatezerana ary ny lahateny fanalam-baraka dia tsy nisy na inona na inona taminao, toy ny tsy fanao ratsy fanahy. Fa andeha hifaneho hatsaram-panahy, mifampiantra sy mifamela heloka, tahak'izay namelan'Andriamanitra ny helok'i Kristy tamin'ny alàlan'i Kristy ».
Ny fomba itondrantsika ny hafa dia zava-dehibe noho ny antony maro. Amin'ny maha-mpino antsika, dia isan'ny tenan'i Kristy isika. Tsy misy olona mankahala ny vatan'izy ireo, fa mikarakara azy (Efesiana 5,29). Noforonina araka ny endrik'Andriamanitra isika. Rehefa manararaotra na manala baraka ny hafa isika, dia manala baraka an'Andriamanitra. Ny fitsipika volamena dia tsy cliché. Mila mitovitovy amin'ny fomba itondrantsika azy ny hafa. Tadidintsika fa miady amin'ny adin'ny olona manokana isika rehetra. Ny sasany dia miharihary amin'ny manodidina antsika, ny hafa kosa miafina ao anatintsika. Izy ireo ihany no fantatsika ireo.
Amin'ny manaraka indray dia mandamina ny fanasan-damba ianao, makà fotoana hieritreretana momba ny olona amin'ny fiainanao sy ny fiheverana manokana ilain'ny tsirairay. Nanao an'izany foana ho antsika Andriamanitra ary mitsabo antsika tsirairay izay mila fikarakarana manokana.